Annaga nagu saabsan - Yixing Boya New Material Technology Co., Ltd.
Yixing Boya New Material Technology Co., LTD waxaa la aasaasay bishii Oct 2018 ku takhasusay cilmi baarista, wax soo saarka iyo iibinta dabacsanaan multi-lakab ah qalabka baakadaha coextruded, Sida mid ka mid ah wax soo saarka ee hormuudka ka ah Shiinaha, Boy lahaa 15 co-extrusion qalab si ay u bixiyaan ballaaran kala duwan ee alaabta macaamiisheena.Waxa aan ka duwanahay kuwa kale waa waxaan aaminsanahay in hal-abuurnimo ay tahay mustaqbalka shirkad, Markaa waxaan si wada jir ah ula shaqeynay Jaamacadda XiBei Industry waxaanan ku martiqaadnay koox dad ah oo haysta shahaadada falsafada ee macromolecule major si ay u wada sameeyaan cilmi-baaris annaga 20 sano ah injineer khibrad leh oo ku saabsan baakadaha cusub maaddo.
Waxaan bilownay soo saarida boorsada vacuum sealer iyo duub ilaa 2002 , anaga oo leh khibrad 20 sano ka badan si aan kuu siino agab dhaqaale iyo tayo sare leh .
Kiishka Vacuum waa badeecad kale oo iib ah oo kulul oo leh awood sanadle ah 5000tons.
Marka laga reebo alaabooyinkan caadiga ah ee caadiga ah Boya waxay sidoo kale ku siinaysaa qalab baakad ah oo buuxa sida samaynta iyo samaynta flim, filim daboolaya, bac iyo filimo, VFFS, HFFS.
Wax soo saarka ugu cusub ee filimka maqaarka ayaa si guul leh u tijaabin doona kaas oo noqon doona wax soo saar ballaaran bisha Maarso 2021 , weydiintaada waa la soo dhaweynayaa!
Cunto badbaado leh
Si toos ah loola xiriiro cuntada, ma jiraan wax ka muhiimsan badbaadada cuntada.
Iyadoo kooxda saddexaad ee kormeerka ah ee goob-isweydaarsigeena waxaan ku gaadhnay FDA, BPA FREE, BRC…….
Uma baahnid inaad wax badan bixiso si aad u hesho alaab tayo sare leh, In nidaamka wax soo saarka ee Boya wuxuu yareeyaa kharashka
Kooxda wax cusub
Waxaan aaminsanahay in hal-abuurnimada kaliya ay faa'iido sameyn karto .Waaxdayada R&D oo leh waayo-aragnimo ka badan 20 sano oo ay la socdaan koox dad ah oo haysta Shahaadada Falsafada ee macromolecule major si ay uga shaqeeyaan cilmi-baarista walxaha cusub ee baakadaha .
Sida mid ka mid ah soo saarista hormuudka u ah baakadaha cuntada, badbaadada ayaa ah tan ugu muhiimsan qof walba .Boya ayaa fiiro gaar ah siiyay
Shaqaale kasta oo ka shaqeeya Boya ayaa bil kasta baadhis caafimaad ku sameeya.Shaqaalaha cusubna waxay aqbali doonaan tababar xirfadeed oo bil ah ka hor intaysan bilaabin shaqada dhabta ah .
Doorashada alaabta ceeriin, waxaan la shaqeynay BASF, ExxonMobil alaabta ceeriin, Dufc kasta waxaa sidoo kale tijaabiyay maareeyaha R&D ee khibrada leh ka hor inta aan la saxiixin.
Dukaanka shaqada ee bilaashka ah ee boodhka, dhammaan shaqaaluhu waxay xidhaan maro shaqo oo isku mid ah, oo leh koofiyad gaar ah.Mar kasta oo ay booqdeyaashu soo galaan aqoon-is-weydaarsigayada waa inay qaataan daboolka kabaha iyo koofiyadaha ka dibna ay maraan qubeyska hawada.
Marka laga reebo dhammaan nidaamka xakamaynta adag ee gudaha, waxaanu sidoo kale ku martiqaadnay kooxda saddexaad si ay ula socdaan shaqadayada, hoos waxaa ku yaal shahaado aan ka helno qolo saddexaad si loo caddeeyo dhammaan alaabooyinka inay yihiin kuwo badbaado leh oo si toos ah ula xiriiri kara cuntada.
Kaliya ma soo saarno agabka baakadaha cuntada oo tayo sare leh, laakiin waxaan sidoo kale soo bandhignaa xalal cusub oo baakadaha.Haddii aad raadinayso badeecooyin leh qiimo tartan ah fadlan noo soo dir emayl, Boya qalab kasta oo soo saara hal badeeco oo aan isbeddelin ama qashin dheeraad ah, waxaad heli doontaa wax ka badan inta aad rabto! Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaan u dhoofinay 55 waddan, oo leh shahaadada buuxda ee EU, FDA iyo BRC, ISO.
Boya waxay ku dadaalaysaa sidii ay u wanaajin lahayd alaabtayada oo ay ugu adeegto ballanqaadyadayada macaamiisheena.Waxaan haynaa wax badan oo aad raadineyso, ma aha oo kaliya badeecada iyo adeegga, waxaan bixinaa ballanqaad kalsooni iyo badbaado.